Izeluleko eziyisishiyagalombili zokuhlobisa ukwenza ikhaya lakho lilandele futhi lihambe
Sihlala njalo sifuna ezinye izindlela ezilula futhi ezinokwethenjelwa zokuhlobisa ikhaya lethu esilithandayo. Akunasidingo sokujaha impumelelo, zama kancane kancane, futhi uzothola kancane kancane izici zezinto ozithandayo futhi ozilangazelelayo. Kusuka kusithombe sangemuva esisha, kuya kufenisha eyenziwe ngezinto zemvelo ...
Sebenzisa umhlobiso wokudala ukuvusa igumbi lokuphumula elikhathele. Shintsha isikhala esiyincithakalo nesiyinyumba ngokungeza imihlobiso efudumele neyaziwayo, wenze igumbi lokuphumula libe yindawo ekhanga kakhulu endlini. Faka izinto ezindala ezitolo ezidayisa izindonga ezindongeni zegalari, umboze izindonga ngephepha elinephethini ...
Izitayela ezinkulu zefenisha zango-2020
Akuyona imfihlo ukuthi ifenisha elungile ingakha kabusha igumbi. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha umkhiqizo owenziwe ngendlela oyifisayo noma ngokukhetha umthengisi omkhulu, konke kuhlobene nokuthola ifenisha efana ne-design aesthetics yakho. Namuhla, ngizokwethulela izitayela eziphezulu zefenisha ngo-2020.
Imakethe yeSpark Craft
Imisebenzi yezandla yensimbi i-Anxi yaqala ukubukiswa eChina Import and Export Fair (Canton Fair) ngo-1991, yabe ithandwa kakhulu ngabantu baseMelika nabaseYurophu. IYurophu kanye ne-United States yizindawo ezijwayelekile kakhulu zokuthekelisa zemikhiqizo yenkampani yethu, ngakho-ke imikhiqizo yethu engama-60% ithunyelwa kwamanye amazwe ...
Spark Craft Namasiko Exhibition
Umbukiso wesithathu waseChina (Anxi) Spark Craft and Culture Exhibition, njengenye yezinhlelo ezixhumene nomkhosi wobuciko waseMaritime Silk Road, wawubanjelwe e-Anxi China ngonyaka wezi-2019. ubuciko namasiko alo. The them o ...
Unyaka nonyaka inkampani yethu ishicilela abenzi bayo bensimbi abaphezulu abangama-40 ohlwini lwayo lwezinto, futhi kulo nyaka siyajabula ukumemezela ukuthi imikhiqizo yensimbi ingunombolo 24 ohlwini. Uhlu lwenzelwe ukusiza ukufunda kabanzi ngabenzi bensimbi ezweni lonke. Uhlu luhlanganiswe ngosizo lwensimbi fab ...